Khudaar Uu Nabi Muxammed CSW Aad U Jeclaa Iyo Faaidooyinka Caafimaad Ee Ku Duugan - Daryeel Magazine
Waxa jira Laba nooc oo khudradda ka mid ah, oo Nabi Muxammed (SCW) uu si aad ah u jeclaa, dabcan wax kasta oo uu jeclaana innaguna waynu jecel nahay, ama ugu yaraan waxa aynu ka dheehanaynaa wanaagga iyo xikmadda ku jirtay shaygaas ee innagu kallifaya in aynu jeclaanno si aynu uga faa’idaysanno. Cilmiga casirgan iyo aqoonta caafimaad ee soo korodhayna waxa ay sugeen faa’idooyin badan oo caafimaadka ugu jira labadan nooc ee khudaarta ah: Haddaba daryeelmagazine.com waxa uu akhristayaashiisa la wadaagayaa labadaas nooc ee khudradda ka mid ah iyo mid kasta faa’idada caafimaad ee cilmiga casrigani ku sheegay.
Bocorka: (Bocorka Afka Carbeed waxaa loo yaqaannaa Dubaa’ ama Yaqdiin): Xadiis uu soo tebiyey Imaam Muslim, ayaa tilmaamaya in uu nebigu jeclaa midhaha bocorka. Geedkani waxa uu Alle (SWT) ku xusay Qur’aanka Kariimka ah, oo waa geedkii uu Qur’aanku ku magacaabay Yaqdiin ee markii uu Ilaahay (SWT) inooga waramayey qisadii nabi Yuunas (CS), markii ii Nibirigii liqay dib u soo tufay ka dul baxay muddadii dheerayd ee uu dhulka yaallay ee aanu kicin Nebigu (CS).
Faa’idooyinka bilowgiiba lagu ogaaday geedkan waxaa ka mid ah in aanu duqsigu u soo dhowaan, sidaa awgeed ay ku jirto xikmad ah in uu nebi Yuunas jidhkiisa ka ilaalinayey qudhunka ka dhalan lahaa cayayaanka ku istaaga muddadaas dheer ee uu dhulka yaallay. Sida laga soo weriyey Nabi Muxammedna (SCW) marka uu ka hadlayo geedkan bocorka waxa uu odhan jiray, “Waa geedkii walaalkay Yuunas”
Dhanka Caafimaadka marka aynu eegno geedkan wax ku jira Faytamiinno aad u badan oo uu ka mid yihiin Faytamiinnada A iyo B. khubarada baadhista cilmiga ah ku samaysayna waxa ay ogaadeen in geedkan uu jidhku ka helo; Biyo aad u badan, Dufan, Protein, Maaddooyin tamarta badiya iwm. Sidoo kale waxa uu wax ka tara gooryaanka ku dhasha caloosha. Daraasado cusub ayaa iyaguna daahfuray in geedkani uu wax ka taro ka hortagga Kansarka. Geedkan ayaa laga yaabaa in ay dadka qaar u gartaan magaciisa Carabiga ah oo ah Dubaa’ ama Yaqdiin waxa uu u eeg yahay shamaamka waxa aanu aad uga baxaa dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya.
Xabxabka: Sida uu dhigayo Xadiis ay kutubtooda ku soo tebiyeen labada Sheekh ee Abu daa’uud iyo Tharmadi, “Rasuulku waxa uu isku cuni jiray Xabxabka iyo timirta Rodobka loo yaqaanno”
Xabxabku waxa uu ka kooban yahay ku dhowaad 94 Boqolkiiba oo biyo ah, Vitamin G, xaddi aan badnayn oo Vitamin B ah, Protein iyo maaddooyin kale oo qaarkood ay wax ka taraan ka hortagga xanuunada qaar.
Ibnu Siina oo ah caalim muslim ah oo wax badan ka qoray caafimaadku ayaa sheegay in xabxabku uu waxtar u leeyahay Maqaarka iyo calool istaagga, waxa uu khabiirkani aad u ammaanay in xabxabka la isticmaalo cuntada ka dib isaga oo isla markaana ka digay in lagu talax tago cunistiisa oo sida uu sheegay wax yeeli karta nidaamka dheefshiid ee qofka.
Dawooyin Nabi Maxamed CSW Aad U Isticmaali Jiray Oo Uu Sunno Ahaan Uga Tagey Dadka Muslimiinta Ah Wax Ka Baro Faaidooyinka Caafimaad Ee Ku Duugan Lowska